Virginia Care Vagina Tightening Gel ၁၀၀ - VirginiaCare
Vagina Tightening Gel | ရင်းနှီးသောအလှကုန်
ကျွန်တော်တို့၏ Gel တင်းကြပ်အင်္ဂါဇာတ် သာမန်လိမ်းဆေးမဟုတ်သလိုဓာတုဗေဒပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂျယ်လ်သည် ၁၀၀% သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများပါဝင်ပြီး Gynecologists and Dermatologists ၏လမ်းညွှန်မှုဖြင့်တီထွင်ခဲ့သည်။ Vaginal Tightening Gel သည်လိင်အင်္ဂါကိုအစိုဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးပြီးပြန်လည်ရှင်သန်စေသည်။ ၎င်းသည်သင်၏မိန်းမကိုယ်နံရံများကိုတင်းကျပ်စေရုံသာမက elasticity ကိုပြန်လည်ရရှိစေသည်။
Revitalize 100 The ၏အားသာချက်များ
တစ်ခုတည်းသောနေ့စဉ်လျှောက်လွှာဖြင့် ၁-၂ ပတ်အတွင်းပြင်းထန်သောရလဒ်ကိုသင်သတိပြုမိနိုင်သည်။
ခြောက်သွေ့သော Vagina ကိုကာကွယ်ပေးသည်
ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာ - ၁၅ ml
MDD: Gel ကို ၁၂ လဖွင့်ပြီးနောက်
သင်၏တိုင်းပြည်တွင် PayPal ကိုအထောက်အကူပြုပါကခရက်ဒစ်သို့မဟုတ်ဒက်ဘစ်ကဒ်! (ဤတွင် Check)
သင်၏တိုင်းပြည်တွင်ထောက်ပံ့ပါက WesternUnion သို့မဟုတ် MoneyGram!
ငွေသားပေးချေမှု (COD)အိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်တို့တွင်သာရနိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ အခြားနိုင်ငံများအားလုံးဤငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုမရွေးပါနှင့်။
Hamamelis သည်အာနိသင်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ရောင်ရမ်းနေသောတစ်သျှူးများကိုကျုံ့စေပြီးယားယံခြင်းနှင့်ယားယံခြင်းကိုသက်သာစေသည်။ ၎င်းတွင်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ရောင်ရမ်းနေသောတစ်သျှူးများနှင့်ချွေးပေါက်များကိုကျဉ်းစေနိုင်သောသဘာဝ tannins များစွာပါ ၀ င်သည်။ Hamamelis တွင် gallic acid ပါ ၀ င်သောဗိုင်းရပ်စ်နှင့်ပိုးမွှားများကိုဆန့်ကျင်သောဂုဏ်သတ္တိများပါ ၀ င်သည်။
၎င်းသည်မိန်းမကိုယ်အတွင်းကျန်းမာမျှတမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်၎င်း၏ရောင်ရမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်သော၊ မှိုသတ်ခြင်းနှင့် antibacterial ဂုဏ်သတ္တိများအတွက်အသုံးအများဆုံးနှင့်လူသိအများဆုံးပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလှအပထုတ်ကုန်များစွာတွင်အဘယ့်ကြောင့်ဆဲလ်များပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းကိုအားပေးသည်။ Vaginal cell regeneration သည်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောအသားအရည်ကိုပြန်လည်ရှင်သန်စေပြီးကူညီပေးသည်။
Chamomilla Recutita ပန်းမှထုတ်ယူသည်
chamomile ပန်းခြောက်များသည် terpenoids နှင့် flavonoids များစွာပါ ၀ င်ပြီးသူတို့၏ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ၎င်းတွင်သဘာဝအတိုင်းငြိမ်သက်စေသောအထောက်အကူပြုဂုဏ်သတ္တိများရှိပြီးသဘာဝပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဖော်မြူလာ၏နူးညံ့မှုနှင့်အစိုဓာတ်ကိုထည့်ရန်ကူညီသည်။
Allantoin သည် comfrey အပင်၏ရုက္ခဗေဒထုတ်ယူမှုတွင်တွေ့ရသည်။ ၎င်းသည် extracellular cell များ၏ရေပါဝင်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးပြီးဆဲလ်သေများ၏အပေါ်ယံအလွှာများကို desquamation ကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းအားဖြင့်မိန်းမကိုယ်နံရံများကိုပြန်လည်နုပျိုစေရန်ကူညီပေးသည်။ ၎င်းသည်အရေပြားချောမွေ့မှုကိုမြှင့်တင်ပေးပြီးဆဲလ်ပြန့်ပွားမှုကဒဏ်ရာကိုကုသပေးသည်။ ၎င်းသည်သက်သာစေသည်၊ သက်သာစေသည်။
Peppermint ကို astringent, antiseptic, emetic, and stimulating ဟုယူဆသည်။ လိမ်းဆေး peppermint ဖြည့်စွက်စာများသည်ယားယံခြင်းကိုသက်သာစေပြီးယားယံခြင်းနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုသက်သာစေသည်။ ၎င်း၏ပိုးသတ်ဆေး၊ ပိုးသေစေသောဘက်တီးရီးယား၊ ပိုးမွှားတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်ပိုးမွှားဂုဏ်သတ္တိများသည် Candida မှိုပိုးကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ရာသီလာစဉ်နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းနှင့်ပျို့အန်ခြင်းများကိုသူတို့၏ကူညီမှုကြောင့်သက်သာစေနိုင်သည်။ Peppermint သည်ကြွက်သားများကိုပြေလျော့စေသဖြင့်ကြွက်တက်ခြင်းကိုသက်သာစေသည်။ ရေဖြင့်ရောစပ်ထားသောငရုတ်ကောင်းစိမ်းအဆီကိုအဖုများနှင့်အသားခြောက်ကဲ့သို့အရေပြားပြသနာများကိုသက်သာစေရန်အဟန့်အတားအဖြစ်သုံးနိုင်သည်။ ကူးစက်မှုများ၊ ယားယံခြင်း၊ ဓာတ်မတည့်ခြင်းနှင့်ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများအားလုံးကို peppermint ဖြင့်ကုသပြီးမျှတသောမိန်းမကိုယ်ကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီသည်။